नकारात्मक विचारहरुलाई कसरी रोक्ने
१. नकारात्मक विचारहरुको परिचय
२. नकारात्मक विचारहरुको परिभाषा
३. नकारात्मक विचारका प्रकारहरू
४. नकारात्मक विचारको प्रभाव
५. नकारात्मक विचारको मूल कारण
५.१ मूल मानसिक कारणहरू
५.२ मूल आध्यात्मिक कारणहरू
५.२.१ नकारात्मक विचारहरु – सूक्ष्म आयाममा तिनीहरूको प्रभाव के हुन्छन् ?
६. नकारात्मक विचारहरू हटाउनको लागि समाधानहरू
के तपाई तल दिएको विचारहरूमा आफूलाई देख्न सक्नुहुन्छ ?
म मेरो मनमा बिगतमा घटेका घटनाहरुलाई बारमबार सोचि रहन्छु (प्राय: अप्रिय भागहरू) ।
म सधैं भविष्यको विशेष परिस्थितिको परिणाम कसरी समहाल्ने भन्ने बारेमा सोचि रहन्छु ।
मलाई खुशी हुनको लागि केहि व्यक्तिहरूको मान्यकरण या स्वीकृति चाहिन्छ ।
जब घटनाहरु मैले सोचेको जस्तै हुँदैन म दु:खी भएर अरुलाई दोष दिने गर्दछु ।
जब व्यक्ति कुनै निश्चित तरीकाले व्यवहार गर्दछ तब मात्र मलाई आफ्नो बारेमा राम्रो लाग्छ ।
मलाई भविष्यको अन्दाजा छ, यसबारे मेरो आफ्नै एउटा छवि छ र यदि घटनाहरू योजनाको रूपमा भएनन् भने म हरेक पटक निराशा महसुस गर्दछु ।
हामी यी विचारहरुलाई विभिन्न तीव्रताको स्तरमा आफुलाई पाउन सक्छौं ।
लगातार नकारात्मक विचारहरूले हाम्रो मनमा प्राय: समस्यालाई ठूलो बनाईदिन्छ, फलस्वरुप हाम्रो खुशी र मानसिक शान्तिहरण हुन्छ । त्यस्ता चिन्तन प्रक्रियाहरू नकारात्मक विचारको लागि सजिलो साधन बन्न पुग्छ, जसले हामीलाई निराशा, मान्सिक चिन्ता र हिन भावना (कम आत्मसम्मान हुने) तर्फ धकेलि दिन्छ । जब त्यस्ता नकारात्मक विचारहरू धेरै आउछन् र हामी संघर्ष गरिरहदा सोच्न थाल्छौं कि इच्छा शक्ति बाहेक यिनीहरूलाई पार गर्न अरु कुनै प्रभावकारी तरीका छ कि छैन । अनेकै प्रेरणादायक वक्ताहरू र स्वयं सहायता मार्गदर्शकहरूले सकारात्मक सोचाई एउटा विकल्प हो भन्ने मान्दछन्, तर यो सायदनै सजिलो हुन्छ । नकारात्मक विचारको उपचार गर्ने, मनोचिकित्सकहरूले व्यक्तिमा स्वयमलाई परिवर्तन गर्ने क्षमतामा ध्यान (उनीहरूको विचारहरू, भावनाहरू र व्यवहारहरू) केन्द्रित गर्दछन्; तर यसले कुनै पनि व्यापक समस्याहरु जसले कसैको स्वास्थ एवं सुखमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन ।
नकारात्मक विचारहरुको विभिन्न परिभाषाहरु छन्; तल एउटा परिभाषा दिएको छ ।
नकारात्मक विचारहरू स्वयं, अरू, या सामान्यतया संसारप्रति अनुभूति हो जुन नकारात्मक धारणा, अपेक्षाद्वारा वर्णित गरिन्छ तथा यो अप्रिय भावनाहरु र प्रतिकूल व्यवहार, शारीरिक तथा स्वास्थ सम्बन्धि परिणामहरुसँग जोडिएको हुन्छन् । (Hawkley, २०१३)
सन्तको परिप्रेक्ष्यमा नकारात्मक विचार :
नकरात्मक विचारहरूले मनलाई व्यापक रूपमा असर गर्दछ । मन स्वस्थ नभएसम्म जीवनमा खुशी हुँदैन । अर्को शब्दमा, नकारात्मक विचारले जीवनको खुशी छिनि दिन्छ । यसले मनलाई कमजोर बनाउँछ, र जीवनको आशाहरुलाई अन्त गर्दछ, यसको परिणामस्वरूप व्यक्तिको जीवन दुःखी र उद्देश्यहीन हुन्छ । ‘- पुजनीय (श्रीमती) अंजली गाडगील
सबै नकारात्मक विचारहरूले हामीमा गहिरो प्रभाव पार्दैन किनभने हामी त्यसमा खासै विश्वास राख्दैनौं । तिनीहरू प्रकृतिमा क्षणिक हुन सक्छन्, अर्थात क्षण भरको लागि हाम्रो चेतनाको प्रवाहमा आउँछन् र जान्छन् । तर केहि अन्य प्रकारको नकारात्मक विचारहरूको सम्बन्धमा, हाम्रो मन हाम्रो व्यक्तित्व अनुसार विभिन्न कुराहरुलाई दोहोर्याइ रहने र नकारात्मक विचारको ढाँचामा जान्छन् । यसले प्रायः वास्तविकताप्रति गलत धारणा निम्त्याउँछ । संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सकहरूले यसलाई यो भन्ने गर्छन् – स्वचालित नकारात्मक विचार (ANTs) । स्वचालित नकारात्मक विचारहरू (ANT) स्वयम प्रति नकारात्मक र अनियमित विचारहरु हुन् ।
डा. डेभिड बर्न्स, एउटा अग्रणी संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सक हुनुहुन्छ, जसले नकारात्मक विचारहरुको केहि सामान्य प्रतिरुपहरुलाई चिन्नु भएको छ, जसलाई हामीले तल सूचीबद्ध गरेका छौं (बर्न्स, १९९९)।
<tr”>९भावनात्मक तर्कहामी मान्दछौं कि हाम्रो नकारात्मक मनोभावहरू या भावनाहरूले परिस्थितिको वास्तविकतालाई परिभाषित गर्दछन्, जब वास्तविकतामा भिन्न हुन सक्छ । मलाई लाग्दछ, त्यसैले यो सत्य हुनुपर्छ । वस्तुनिष्ठ नभई मलाई कस्तो लाग्छ त्यसको आधारमा निर्णय लिने बानी ।
नकारात्मक विचारको प्रकारहरु
१ सबै थोक या केहि पनि होइन प्रवृतिको सोच हामी चीजहरूलाई राम्रो या नराम्रो श्रेणणीबाट लिन्छौं । यदि हाम्रो प्रदर्शन उत्तम भएन भन तब हामी आफैंलाई पूर्ण असफलताको रूपमा लिन्छौं ।
२ धेरै सामान्यीकरण गर्ने हामी एउटा नकारात्मक घटनालाई हारको कहिल्यै अन्त्य नहुने ढाँचाको रूपमा देख्छौं ।
स्व-अनुमान लगाउँने हामी एउटा नकारात्मक विवरण लिन्छौं र हामी यस घटनामा मात्रै धेरै सोचि रहन्छौं, जसले गर्दा हाम्रो वास्तविकता प्रतिको मनोवृत्ति अस्पष्ट हुन्छ, जस्तो की एक थोपा मसीले भाडामा राखेको सम्पूर्ण पानीको रङ्ग बिगारिदिन्छ ।
४ सकारात्मकतालाई अयोग्य ठान्ने कुनै एउटा या अन्य कारणले हामी सकारात्मक अनुभवहरू अस्वीकार गर्छौं । यो तरीकाले, हामी नकारात्मक विश्वास कायम गर्न सक्छौं जुन हाम्रो दैनिक अनुभवहरूको विपरीत हुन्छन् ।
५ निष्कर्षमा पुगी हाल्ने हामी एउटा नकारात्मक व्याख्या गर्छौं जबकि केहि निश्चित तथ्यहरु हुँदैन जसले हाम्रो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दछ ।
६ मन पढ्ने हामी मनमनै निष्कर्षमा पुग्दछौं कि कसैले हामीप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, जब हामीसँग व्यक्तिको विचारहरूको बारेमा पर्याप्त प्रमाण हुँदैन । साथै, हामी यसलाई प्रमाणित गर्न पनि खोज्दैनौं ।
७ भाग्य बताउने गल्ती हामी अनुमान गर्छौं कि परिस्थितिहरू खराब हुँदै जान्छन्, र हामी विश्वस्त रहन्छौं कि हाम्रो भविष्यवाणी एउटा प्रमाणित तथ्य हो ।
८ स्थितिलाई बढाई दिने (भयावह रुपमा) अथवा न्यून गरेर देखाउँने जब हामी हाम्रो गल्तीहरु या त्रुटिहरू लिन्छौं र तिनीहरूलाई बढाईचढाई गर्छौं अथवा हाम्रो या अन्य व्यक्तिको शक्ति र सकारात्मक गुणहरूको खण्डन गर्दछौं ।
१० यस्तो नै हुनुपर्छ भन्ने कथन हामी ‘यस्तो हुनुपर्छ’ तथा ‘यस्तो हुनु हुँदैन’, ‘यस्तो हुनुनै पर्छ’ तथा ‘अवश्य हुनुपर्छ’, जस्ता कथनले स्वयमलाई प्रेरित गर्ने प्रयास गर्दछौं । भावनात्मक परिणाम दोषी बोध हुनु हो । जब हामी अन्यप्रति यस्तो हुनुपर्छ भनेर वाक्य निर्देशित गर्दछौं तब हामी क्रोध, निराशा तथा अपमान अनुभव गर्दछौं ।
११ छाप लगाउँनु (सधै यस्तै हो भनेर मान्ने) तथा गलत छाप लगाउँने यो अधिक सामान्यीकरणको एउटा चरम रूप हो । हाम्रो गल्ती वर्णन गर्नुको सट्टा, व्यक्ति स्वयममा नकारात्मक छाप लगाई दिन्छ – “म असफल व्यक्ति हुँ”। जब अरू कसैको व्यवहार हामीलाई राम्रो लाग्दैन तब हामी त्यस व्यक्ति माथि नकारात्मक छाप लगाउँछौं ।
१२ निजीकरण/वैयक्तिकरण वैयक्तिकरणमा व्यक्ति अरुले जे सुकै भनोस् या गरोस् उप्रति कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हुन सक्छ भनेर मान्छ । सबै कुरालाई स्वयमसँग जोड्छ, जबकि वास्तवमा त्यसको अर्थ त्यस्तो हुँदैन ।
हामीले सेक्शन ६ (आध्यात्मिक समाधानहरू) मा नकारात्मक विचारलाई कसरी हटाउने भनेर विस्तृत वर्णन गरेका छौं ।
नकारात्मक विचारबाट पीडित व्यक्ति दुर्बल हुन सक्छ । यसले प्रायः व्यक्तिको वरपरका मान्छेहरूलाई पनि असर गदर्छ । नकारात्मक विचारका केही प्रभावहरू हामीले तल सूचीबद्ध गरेका छौं :
यसले हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ ।
यसले हाम्रो सम्बन्धलाई नराम्रो असर गर्दछ ।
नकारात्मक विचारले हाम्रो आत्माबल भंग गर्दछ र सकारात्मक रूपमा बढ्नको लागि गरिने संकल्प पनि रोकिदिन्छ
अत्यधिक नकारात्मक सोचाइले गम्भीर चिन्ता या चिकित्सकीय मान्सिक चिन्ता, विद्रोह, र अत्यन्त गम्भिर अवस्थामा आफैलाई हानि पुर्‍याउने या अरूलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ । WHO को तथ्याड़क अनुसार विश्वभरि ( ३०० करोड भन्दा बढी व्यक्ति मान्सिक चिन्ताबाट प्रभावित छन् (WHO, २०१८) जबकि विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक वर्ष ८००,००० व्यक्तिहरु आत्महत्याबाट मर्छन् (४० सेकेन्डमा १ जनाको मृत्यु) (WHO, २०१९ )।
मानसिक रोगहरूले दीर्घकालीन रोगहरु बढाउँनमा सीधा असर गर्दछ जस्तै हृदय रोग, मधुमेह, मोटोपना, दम, मिर्गी र क्यान्सर ।
यसले दैनिक कामकाजमा अवरोध खडा गर्न सक्छ र चरम अवस्थाहरूमा यसले व्यक्तिगत, सामाजिक र व्यावसायिक कमजोरीहरूमा वृद्धि गर्न सक्छ र असमय मृत्युसमेत पनि निम्त्याउन सक्छ ।
आध्यात्मिक अनुसन्धान को माध्यमबाट, हामीले पत्ता लगायौं कि ९० % मानसिक रोगहरू को मूल कारण आध्यात्मिक आयाममा हुन्छ । मानसिक रोगहरूको मूल कारणको रूपमा शारीरिक तथा मानसिक कारकहरू आध्यात्मिक कारकको तुलनामा सामान्यतया कम मात्रामा हुन्छ । यो मुख्य कारण हो सबै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध हुँदा पनि, व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न असमर्थ हुन्छ । नकारात्मक विचारको वास्तविक कारणलाई बुझेर त्यसलाई स्वीकार गरि स्थाई सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँने पहिलो चरण हो ।
आध्यात्मिक अनुसन्धान अनुसार, नकारात्मक विचार निम्न उप-खण्डहरुमा उल्लेख गरे जस्तै या त शारीरिक, मानसिक र/या आध्यात्मिक मूल कारणहरुले हुन सक्छ । निम्न तालिकाहरूले नकारात्मक विचारको मूल कारणहरू देखाएको छ ।
स्रोत: आध्यात्मिक अनुसन्धान – ०९ सेप्टेम्बर २०१९
अत्यधिक नकारात्मक विचारको स्थितिमा, मूल कारणको आध्यात्मिक घटकको अनुपात ५०% भन्दा पनि बढी हुने सम्भावना हुन्छ ।
परम पुज्य डा. आठवले पूर्व प्रख्यात सम्मोहन चिकित्सक हुनु हुन्छ र उहाँले चिकित्सकिय सम्मोहन र मनबारे आध्यात्मिक अनुसन्धानमा करीव ४० वर्षको संयुक्त अनुसंधानको अनुभव प्राप्त गर्नु भएको छ ।
उहाँको अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसार, नकारात्मक विचार अवचेतन मनमा भएको स्वाभावदोषको (जस्तै क्रोध, डर, ईर्ष्या, भावनात्मकता, असुरक्षा, मूल्यांकन गर्नु, नकारात्मक विचार, आदि) संस्कारबाट आउँदछ । यी संस्कारहरू निरन्तर बाह्यमन (सचेत मन) मा विचारको रुपमा आवेगहरु पठाउँदछन् । हाम्रो बाह्यमनको अवस्था यी आवेगहरुले निर्धारित गर्दछ र हामी नकारात्मकता अनुभव गर्दछौं या गलत तरिकाले व्यवहार गर्दछौं ।
आधुनिक विज्ञान अनुसार, गम्भीर चिन्ता या चिकित्सकीय मान्सिक चिन्ता जैविक र मनोवैज्ञानिक कारणले हुन सक्छ, जस्तै अचानक जीवनमा प्रमुख परिवर्तनको प्रतिक्रिया, आनुवंशिक कारणहरू, पदार्थ दुर्व्यसन, औषधिबाट हुने रोग, आदि (mayoclinic.org, २०१९) ।
जहाँसम्म, आध्यात्मिक अनुसन्धानको माध्यमबाट, हामीले पत्ता लगायौं कि प्रायः गम्भीर चिन्ता र चिकित्सकीय मान्सिक चिन्ता आध्यात्मिक कारणहरूले हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसले यो पनि थाहा हुन्छ कि मनोचिकित्सकहरू लाक्षणात्मक उपचार गर्नमा सक्षम हुन्छ जुन स्थायी हुँदैन किनकि यसले मूल कारणलाई सम्बोधन गर्दैन । अत: समस्या पुन: उत्पन्न हुन जान्छ ।
नकारात्मक विचारको प्रमुख कारण आध्यात्मिक पनि हुन्छ । नकारात्मक विचारहरूको बल, अवधि र तीव्रता आध्यात्मिक कारकहरूको कारणले ज्यादा मात्रामा बढ्न सक्छ । अगाडि मुख्य आध्यात्मिक कारकहरू दिएका छन् जुन नकारात्मक विचारको कारण हुन सक्छ ।
अनिष्ट शक्ति (नकारात्मक ऊर्जा)
अनिष्ट शक्ति व्यक्तिलाई बाहिरबाट असर गर्न सक्छ या एउटा व्यक्तिलाई उसको अधिकारमा (आविष्ट) पनि गर्न सक्छ विशेष गरि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रुपमा कमजोर हुन्छ ।
अधिक स्वाभाव दोष र उच्च अहंकार भएका व्यक्तिहरूलाई अनिष्ट शक्तिद्वारा लक्षित हुने बढी सम्भावना हुन्छ, किनकि उनीहरु आफूजस्तै स्वाभावदोष र अहंकार भएका व्यक्तिहरूप्रति आकर्षित हुन्छन् ।
अनिष्ट शक्तिले पनि समस्यालाई ठूलो बनाउन सक्छ – उदाहरणको लागी, यदि व्यक्तिमा क्रोधको विचार छ भने, अनिष्ट शक्तिहरु त्यसमा हावी हुन सक्छन् ।
टिप्पणी: यस विषयमा अधिक जानकारीको लागि पढ्नुहोस् कसरी अनिष्ट शक्ति विचारहरुको माध्यबाट मानिसहरुलाई हानि पुर्याउँछ
प्रारब्ध एवं लेन-देनको खाता
जब एक अर्कासँग नकारात्मक लेन देन खाताहरू हुन्छन् भने यसले नकारात्मक विचारहरूको सिर्जना गर्ने गर्दछ । साथै, यदि कसैको तीव्र प्रारब्ध छ भने, त्यस व्यक्तिमा अधिक मात्रामा नकारात्मक विचारहरु हुन सक्छ । प्रारब्ध एउटा प्रमुख कारण हो जसले गर्दा मानिसहरु जीवनमा दुःखको अनुभव गर्दछन् । आध्यात्मिक अनुसन्धानको माध्यमबाट हामीलाई थाहा भयो कि हाम्रो ९८% व्यक्तित्वहरू हाम्रो अवचेतन मनमा भएका संस्कारहरूबाट निर्मित हुन्छन् जुन विगतका अनेक जन्महरुबाट साथमा आएका हुन्छन् ।
टिप्पणी: यहाँ प्रारब्ध बारे थप पढ्नुहोस् ।
असन्तुष्ट पुर्खाहरूको सूक्ष्म देहले प्रायः उनीहरूको वंशजलाई प्रभावित गर्दछ । यो विभिन्न कारणहरूले हुन सक्छ । अत्यधिक नकारात्मक विचार आउँनु दिवंगत पुर्खाहरूद्वारा उत्पन्न समस्याहरूको लक्षण हुन सक्छ ।
थप पढ्नुहोस्: पितृदोष के हो ?
हाम्रो विचारहरुमा चन्द्रमाको प्रभाव
सहस्त्राब्दिहरु देखि यो एउटा लोकप्रिय दृष्टिकोण रहेको छ कि चन्द्रमाले व्यक्तिको मानसिक स्थितिमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ । मानिसमा चन्द्रमाको आध्यात्मिक प्रभाव मा SSRF द्वारा गरिएको आध्यात्मिक अनुसन्धानले यस दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्दछ । यो विशेष गरी पूर्णिमा र औंसीको रातहरूमा देखिन्छ, जहाँ नकारात्मक विचारहरू र अनिश्चित व्यवहारहरुमा वृद्धि हुन्छ ।
हाम्रो आध्यात्मिक अनुसन्धान टोलीमा यस्तो साधकहरू छन् जसले व्यक्ति तथा वस्तुहरूद्वारा प्रक्षेपित हुने सूक्ष्म स्पन्दहरू बुझ्न सक्दछन् । उनीहरुमा अति जागृत छैठौं इन्द्रियको माध्यमबाट दृश्य स्वरूपमा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षमता छन् । यी चित्रहरू आध्यात्मिक एक्स-रे समान हुन्छ र एउटा औसत व्यक्तिलाई आध्यात्मिक आयामको अनुपम झलक प्रदान गर्दछ ।
तलको चित्रमा, नकारात्मक विचारहरूले व्यक्तिलाई कसरी प्रभाव पार्दछ, यसको सूक्ष्म प्रक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ ।
व्यक्तिमा नकारात्मक विचार हुँदा जुन सूक्ष्म प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको संक्षिप्त विवरण अगाडि प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वप्रथम जुन व्यक्तिसँग अधिक अहं छ नकरात्मक विचार उसलाई सजिलैसँग आउँदछ । यसको कारण हो उनी आफ्नो अहं सन्तुष्ट गर्ने बारे विचार गर्दछ । यसले भावनाहरू पनि बढ्दछ । जब यस्तो हुन्छ, यसले व्यक्तिको आज्ञा- चर्कलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र उसको सोच भ्रष्ट हुन्छ । त्यहाँ एक किसिमको श्रृंखलात्म अभिक्रिया हुन्छ जहाँ एउटा विचारमा निर्मित भएको कष्टदाई शक्ति अन्य सबै विचारहरूमा स्थानान्तरण हुन्छन् । फलस्वरूप व्यक्तिमा अनिष्ट शक्ति आकृष्ट हुन्छ जसले शरीरको चारैतर्फ र टाउकोको वरिपरिको क्षेत्रमा कष्टदाई शक्ति वृद्धि हुन्छ । व्यक्ति नकारात्मक विचारहरुमा हराउदछ र आफ्नो वरिपरि के भई रहेको छ यस विषयमा अनभिज्ञ हुन्छ । नकारात्मक विचारले उसको वास्तविकतालाई आकार दिन थाल्छ ।
व्यायाम गर्नु, औषधि लिनु (आवश्यकता अनुसार), प्राणायाम गर्नु, शान्त संगीत सुन्नु, के-के कार्य गर्नु छ त्यसको सूचि बनाउनु, स्वास्थ बिहानीको नियोजन गर्नु आदि जस्ता समाधान मनलाई सकारात्मक रुपले व्यस्थ राख्नमा सहायता गर्दछ । तर, नकारात्मक विचार मनसँग सम्बन्धित भएकोले, शारीरिक समाधानहरू एउटा सर्वसमावेशक समाधान होइन, यसमा व्याकुलता अधिक हुन्छ ।
केहि फरक लोकप्रिय मानसिक समाधानहरु हुन् सकारात्मक वाक्य, सचेतना (mindfulness) को अभ्यास गर्नु, मनोचिकित्सकको सहायता लिनु आदि । संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (CBT) पनि एउटा व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ र आफ्नो विचारहरूको डायरी बनाएर नकारात्मक विचारलाई सकारात्मक विचारद्वारा प्रतिस्थापनमा समावेश गरिन्छ । तर सकारात्मक वाक्यको पनि सीमितता हुन्छ । हामीले यसलाई हाम्रो लेखमा बताएका छौं- स्वयम सूचनाहरु विरुद्ध सकारात्मक वाक्यहरुमा बताएका छौं ।
साधना (आध्यात्मिक अभ्यास) र आध्यात्मिक उपचारहरू नकारात्मक विचारहरू हटाउनको लागि शक्तिशाली साधनहरू हुन्, खास गरी जब मूल कारण आध्यात्मिक प्रकृतिको हुन्छ । साधनाले सकारात्मक आध्यात्मिक उर्जा उत्पन्न गर्दछ, जसले नकारात्मक उर्जाहरू बिरूद्ध बचाउन मद्दत गर्दछ र प्रतिकूल प्रारब्धलाई कम गर्दछ । नकारात्मक विचारहरू हटाउन, निम्न अभ्यासहरू सिफारिस गरिन्छ ।
१. नामजप: ‘श्री गुरुदेव दत्त‘ नामजपले नकारात्मक विचारलाई हटाउन मद्दत गर्दछ, विशेष गरी पितृदोषको सम्बन्धमा सहायता गर्दछ । वर्तमान काल अनुसार यस नामजपको साथ-साथै, सबै प्रकारको नकारात्मक विचारहरुको प्रतिकार गर्न जस्मा अत्यधिक तीव्र स्वरुपको नकारात्मक विचार सम्मिलित हुन्छ, त्यसलाई प्रतिकार गर्न “ओम नमो भगवते वासुदेवाय” नामजप गर्नको लागि सलाह दिइन्छ ।
२. साधनाको चरणको रुपमा स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया: परम पूज्य डा. आठवलेज्यूले स्वभाव दोष निर्मूलन (PDR) प्रक्रियाको मार्ग देखाउनु भयो । स्वभाव दोष निर्मुलन प्रक्रियाले अवचेतन मनमा व्यक्तित्व स्वाभावदोषहरुको संस्कार हटाउन मद्दत गर्दछ । यसले अवचेतन मनलाई शुद्धि गर्दछ (जुन मनको ९०% भाग हो) । स्वभाव दोष निर्मुलन प्रक्रियाहरु वास्तविक घटनाहरू या नकारात्मक विचारहरू स्वयम सूचनाको माध्यमबाट सम्बोधन गरिन्छ जुन व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार बनाइन्छ । डा. डेभिड बर्न्सद्वारा पहिचान गरिएको विभिन्न नकारात्मक विचारहरुको स्वरुपहरूलाई हटाउन तल हामीले विभिन्न स्वयम सूचनाहरु दिएका छौं ।
SSRF Inc बाट नकारात्मक विचारहरु हटाउन स्वयम सूचनाहरु
३. नुन पानीको उपचार: यो १५-मिनेटको उपाय कालो शक्ति हटाउन, जुन प्राय: नकारात्मक विचारहरुको स्त्रोत हुन्छ, यसको लागि प्रभावकारी तरीका हो । यस बारेमा थप जानकारीको लागि – नुन-मिश्रित पानीद्वारा आध्यात्मिक उपचार ।
नकारात्मक विचारसँग संघर्ष गर्नु एकदम निराशजनक र थकित महसुस हुन्छ । आध्यात्मिक अनुसन्धान केन्द्रमा हामी तपाईको यथार्थ स्थिति बुझ्न सक्छौं र हामी भन्न चाहन्छौं कि तपाई एक्लो हुनु हुन्न । यो हाम्रो अनुभवमा आएको छ कि विश्वको जनसंख्याको एउटा विशाल अनुपात उनीहरूको जीवनमा कुनै न कुनै स्थितिमा नकारात्मक सोचाइबाट ग्रस्त भएका हुन्छन् । नकारात्मक विचारहरू हटाउन अधिकांशलाई गाह्रो लाग्नुको कारण हो, समस्याहरूलाई केवल शारीरिक र मानसिक समाधानले मात्र सम्बोधन गर्न खोज्छन् । तर प्राय: समस्याहरु आध्यात्मिक स्तरमा हुन्छ त्यसैले कम प्रभावकारी हुन्छन् । हामीले सुझाव गरेका आध्यात्मिक चरणहरूलाई अभ्यास गर्नु भयो भने तपाईले आफ्नो मानसिक अवस्था र जीवनको गुणस्तरमा निश्चित सुधार पाउनु हुनेछ ।
बर्न्स, डी डी, १९९९. फीलिंग गुड: दि न्यू मूड थेरापी. न्यू योर्क: हार्पर कोलिनस प्रकाशकहरू इंक ।
हकली, एल. सी., २०१३. नकारात्मक विचारहरू. [अनलाइन]
यहाँ उपलब्ध छ : https://link.springer.com/referencesworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1005-9_1563 [Accessed 16 07 2019]।
मनुष्य कुन घटकले बनेको छ ?
नामजपले कसरी मनलार्इ निर्मल एवं शुद्ध बनाउछ ?
मेरो मृतक प्रियजन अनि अन्य पूर्खाले मलार्इ किन यातना दिन चाहन्छ ?